अस्ट्रेलियाका नेपाली विद्यार्थीको गुनासो : कलेजले फी मागेर हैरान बनायो ! सेयर गरौ «
अस्ट्रेलियाका नेपाली विद्यार्थीको गुनासो : कलेजले फी मागेर हैरान बनायो ! सेयर गरौ
Published : 13 April, 2020 9:19 pm
न काम छ न कलेज । पलपल नेपाल र गाउँघरको याद आउँछ तर कोठामै बस्नुको विकल्प छैन । न नेपाल फर्किन सक्ने अवस्था छ न अब अस्ट्रेलियामै भविष्य के हुने हो भन्ने सुनिश्चित छ । अध्ययनका लागि अस्ट्रेलिया पुगेका थुप्रै विद्यार्थीका लागि अहिले अर्को तनाब थपिएको छ । अस्ट्रेलिया सरकारले लकडाउन गरेर घरमै बसेका विद्यार्थीसँग कलेजले शुल्क माग्दै इमेल पठाउन थालेपछि धेरै विद्यार्थीमा अहिले तनाब बढेको हो । अध्ययनका लागि पुगे पनि अस्ट्रेलिया पुगेका अधिकांश विद्यार्थीले काम गर्दै कलेजको फी तिर्छन् ।
अस्ट्रेलिया सरकारले अध्ययनका लागि गएको एक वर्ष कटेका विद्यार्थीले सुपर इनिभेसन ट्याक्सबाट पैसा निकालेर चलाउन सक्ने भनेको छ । कामको प्रकृति र पारिश्रमिक हेरेर फूल टाइम काम गर्नेको पनि एक वर्षमा बढीमा ४÷५ हजार डलरभन्दा नहुने विद्यार्थीको भनाइ छ ।
‘अझै कति लकडाउन हुने हो भन्ने पत्तो छैन । सुपर इनिभेसनको पैसाले ग्रोसरी र रेन्ट तिर्दा नै सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा कलेजले फी मागेपछि धेरै विद्यार्थी समस्या परेका छन्,’ काठमाडौं चन्द्रागिरिकी भूमिका लामाले भनिन्, ‘यहाँ त्यस्ता धेरै विद्यार्थीहरु छन्, जसले अहिले नै सेमेस्टर फी तिर्नुपर्ने छ । कम्तिमा शुल्कका विषयमा सोचिदिए हुन्थ्यो । तर, कलेजहरुले शुल्क मागिरहेका छन् । थुप्रै साथीहरु अहिले त्रसित छन् ।’
नेपाली संघसंस्थाहरुले चामल दाल बाँडिरहेको खानकस्नकै समस्या भने नहुने सन्तोषले बताए । ‘नेपाली संघ÷संस्थाले अप्ठेरोमा परेका विद्यार्थीलाई राहतदेखि समस्या समाधानका निम्ति पहल गरिरहेका छन्,’ उनले भने । भिजिट भिसामा अस्ट्रेलिया पुगेर फर्किन नपाएका, कामबाट छुटिसकेर नेपाल नेपाल फर्किन नपाएकाहरु पनि समस्यामा रहेको उनले बताए ।